ပန်ဒိုရာ: ငယ်ငယ်တုန်းက စာအုပ်ဆိုင်ကလေး
Posted by pandora at 4:25 PM
လူငယ်တွေ စာပေမျိုးစုံ ဖတ်ဖြစ်ကြတယ်.
ခုအက်ဆေးလေးက ရင်ထဲထိရှလှပါတယ်.. မမပန်
ပြန်တင်ပေးတာကျေးဇူးပါပန်ရေ. ငယ်ငယ်က ငှားနေကျစာအုပ်ဆိုင်လေးကိုပြန်လွမ်းသွားတယ်. အပြင်စာဖတ်ဖို့ အားမပေးတဲ့မိဘတွေကြောင့် ခိုးကြောင်ခိုးဖဝှက် သဲထိတ်ရင်ဖို ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ကိုယ့်ဘဝပြန်တွေးရင်း. စာအုပ်ဆိုင်လေးတဆိုင်ပိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ပန်တို့ ဘဝအားကျမိပါတယ်. အမြော်အမြင်ကြီးတဲ့မိဘတွေရဲ့ရင်းနှီးမှုအသီးအပွင့်က ဒီနေ့ စာအရေးကောင်း ကဗျာအရေးကောင်းတဲ့ပန်ဒိုရာဆိုတဲ့စာရေးဆရာမလေးပဲပေါ့နော်.